Ny Semalt Expert dia mamelabelatra ny fomba fijerin'ny mpitsikilo momba ny tranonkala
Ny ankamaroan'ny tompon'ny tranonkala dia mijaly noho ny vokatry ny fifamoivoizana momba ny spam. Amin'ireo tranga ireo, ny spam referrer dia mamorona domains maromaro izay manao fitohanana mankany amin'ny tranonkala. Ohatra, ny fitsangatsanganan-tsarimihetsika momba ny spam dia mety hipoitra avy amin'ny mpitsidika olona ao amin'ny tranokala. Amin'ireo tranga ireo, ny fifamoivoizana dia tonga amin'ny ampahany izay misy fifandraisana 0 segondra. Amin'ny toe-javatra hafa, mahatsapa ny fitsidihan'ny tranonkala amin'ny tranonkalan'ny tranonkalany sy ny lozam-pifandraisana avo lenta ny olona. Ireo no tranga izay mampifandray ny fifamoivoizana amin'ny tranokala habaka. Tokony hahafantatra sy hamaha ireo spam referrer ianao hamono ny ankamaroan'ny fitsidihana aterineto. Ny tranonkala referrer dia manaparitaka ny angona vohikala izay mampivelatra ny tranonkala manerana ny vohikala.
Iray amin'ireo manam-pahaizana lehibe avy amin'ny Semalt , Jason Adler, dia mamaritra ireo olana saro-pantarina mba hahombiazany amin'ny fanatanterahana izany.
Ny tranonkalan'ny referrer dia sehatra iray izay manana rindrambaiko sy fitaovana hanatanterahana asa atao miverimberina. Avy amin'ny tranonkalanao, mety ho azonao ny fifamoivoizana avy amin'ny domains amin'ny pejy GA anao. Toy izany koa, misy ny tranga hafa ahafahan'ny olona mahazo fitsidihana amin'ny Internet na tsindry maro mifandraika amin'ny vokatra avy amin'ny orinasa toy ny pharmaceuticals. Raha misy rohy mankany amin'ny tranonkalanao dia avy amin'ny sehatra hafa, ny vintana dia avy amin'ny avy amin'ny spam referrer. Raha ny marina dia tsy misy intsony ny loharanon'ny rohy. Ankoatra izany, mety ho zary fitaovana na virosy izay mifandray amin'ny tranonkalanao ianao mba hamoronana tranonkala sandoka.
Ny spam referrer dia mety hitranga amin'ny fomba roa samy hafa:
Amin'ny toe-javatra sasany dia mety hikorontana ny tranokalanao ny tranokala mpikirakira tranonkala sasany. Amin'ity tranga ity dia manao tranonkala vitsivitsy izy ireo ary tsy miraharaha ny rakitra robots.txt..Ireo fitsidihana aterineto dia mety tsy miseho amin'ny tontolon'ny tranonkalanao.
Ity tetika ity dia manome fepetra fonosana maromaro ao amin'ny tranonkala iray. Ankoatr'izany, maro ireo asa izay ampiasain'ny olona mba hahatonga ny isa hita ao amin'ny kaonty GA. Tsy miseho amin'ny fiaramanidin'ny tranokala ity fitohanana ity.
Ireo antony mahatonga ny spam referrer
Misy antony maro ao ambadiky ny spam referrer SEO. Maro ireo olona mampiasa ireo fomba ireo amin'ny fomba fikajiana sandoka ary mamorona loharano ara-drariny. Ohatra, ny sasantsasany amin'ireo antony mahatonga ireo fanafihana mampihoron-koditra ireo dia mampiasa spam referrer dia ahitana:
1.Increasing web visits
Ny ankamaroan'ny olona dia mampiasa spam referrer mba hanatsarana ny fitsidihany. Maniraka tonta fifamoivoizana any amin'ny tranonkala izy ireo mba hampitombo ny lanjan'ny olona iray manindry ny rohy. Ny lalao farany dia mifandray matetika amin'ny sehatra orinasam-pandraharahana na eny amin'ny tambazotran'ny dokambarotra. Manantena izy ireo fa hanao fanaraha-maso avy amin'ireo mpitsidika izay mifarana amin'ny sehatra spam.
2. Fanafihana malemy
Amin'ny toe-javatra sasany, dia mety ho lasibatra amin'ny solon'anarana maloto ny olona. Ny fampiasana ny antso ho amin'ny asa dia mety mampiasa ny otrik'aretin'ny otrikaretina. Ny fanafihana toy izany dia manampy amin'ny fisafotofoto amin'ny aterineto toy ny fangalarana karatra amin'ny banky ary koa ireo fanafihana amin'ny Internet hafa.
3. Searching rankings
Amin'ny tranga manokana dia mety hitady ny hampitombo ny tranokalan'ny eo amin'ny habaka ny olona sasany. Amin'ireny tranga ireny dia manandrana manofoka (algorithms) karazana fikarohana ny olona hanombana tranonkala iray voalohany. Midika izany fa ny famangiana ny tranonkala dia natao mba hahazoana antoka fa ny tranokala manontolo dia tonga ao amin'ny SERP an'ny pejy manokana sasany Source .